Taratasim-baovaon’ny RV: Tanora zanatany miady amin’ny fanilikilihana virtoaly ny fitenin-dry zareo · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-baovaon'ny RV: Tanora zanatany miady amin'ny fanilikilihana virtoaly ny fitenin-dry zareo
Voadika ny 21 Oktobra 2021 2:15 GMT
Fanaingoana nataon'i Isela Xospa, arovan'ny zon'ny mpamorona ary nahazoan'ny Global Voices alàlana ny fampiasàna azy
Fanamarihan'ny Rising Voices : Manome famintinana ireo lahatsoratra am-bilaogy nivoaka farany mikasika ny lafiny rehetra amin'ny fampiatiana nomerika ny taratasim-baovaonay, anatin'izany ny fidirana sy fandraisana ireo fitaovana dizitaly, ary koa ny fomba maro isan-karazany ahafahan'ireo vondrompiaramonina hanararaotra handray anjara feno anaty aterineto.Vakio eto ireo lahatsoratra teo aloha anatin'ity taratasim-baovaonay ity
Arahaba ry mpamaky! Elaela tsy nifankahita isika — ialàna tsiny ny amin'izany. Nila fotoana kely izahay nieritreretana momba izay tiantsika ho endrik'ity taratasim-baovao ity, ary nisy zavatra hafa nahaliana nandritra izay fotoana tsy naha-teo anay izay.
Nisy fiantraikany nanelingelina ny maro, izay efa voahidy rahateo tany amin'ny lafy ratsin'ny fivakisana nomerika, ilay valanaretina sy ny fikisahantsika nankamin'ny fiainana sy asa virtoaly. Kanefa ny aterineto ihany koa dia habaka iray feno fahaizamamorona goavana sy fampivondronana, miaraka amin'ireo olona mitolona ho an'ny zony sy mitaky ny habak'izy ireo ao anatin'ny tontolo nomerika.
MISIMISY KOKOA AVY AO AMIN'NY BILAOGIN'NY RISING VOICES
Na naka fotoana kely aza izahay, tsy nitsahatra nanaraka ireo tantara goavana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Anatin'ity laharana fiverenana ity, tianay hasongadina ho anareo ireo sasantsasany navoaka nandritra io fiatoana io.
Voalohany indrindra, ireo mpamorona votoaty zanatany dia tsy hoe fotsiny niezaka nampiroborobo ny fitenin-dry zareo, fa koa nampita ny dika ara-kolontsaina raketiny ho an'ireo andian-taranaka hoavy:
→ Mamelona indray ny teny Cree sy Ojibwe an'i Manitoba miaraka amin'ny TikTok [mg]
→ Miaro ny tenin-drazan'izy ireo amin'ny fampiasana sarimiaina ireo mpamorona sarimiaina Afrikanina [mg]
Anatin'izay toetsaina izay ihany, avy any Meksika hatrany Aostralia, resahan'ireo tanora zanatany ny momba izay fomba nahatonga ny fitenin-dry zareo ho anjorom-bàla ao anaty tontolo iray virtoaly, sy tetikady iray azo ampiharina mba hamerenana indray ny tanjaky ny fitenin-dry zareo. → Avy any Meksika hatrany Aostralia, mamerina mandinika ny aterineto ho an'ny fitenin-dry zareo ireo tanora zanatany [Ang.]
Mandritra izany fotoana izany, naka ny sehatry ny media sôsialy ireo olona pelaka ao Bôlivia [mg], mikatsaka izay hanamafisana ny feon-dry zareo amin'ny fomba feno famoronana, ary miteraka adihevitra fanentanana. Etsy ankilany, ireo mpiaro ny tany dia mampiasa ny tanjak'ireo fitaovana nomerika mba hamondronany ny otrikareny sy hifanohanan-dry zareo hanaovana izay hampandrosoana ny fanentanana ara-tontolo iainana ataony.
Tamin'ny lafiny maro dia nisy fiantraikany tamin'ny fiainantsika ny COVID-19, isan'izany ny fampianarana. Ho an'ireo tranombokim-panjakàna izay miezaka manohana ny fiarenan'ny fampianarana amin'ny alàlan'ny teknôlôjia TIC nandritra ity valanaretina ity, tian'ny Electronic Information for Libraries ny mba handre ny tantaranareo! Miangavy, jereo eto [es] [fr] [ru] hahafantaranao ny fepetra fisafidianana sy ny antsipirihany amin'ny firotsahana hifaninana hahazo ny 15th EIFL Innovation Award. Fetra farany fisoratana: November 8, 2021
HETSIKA SY KAONFERANSA
Raha maro ireo lasa zatra tamin'ilay “andavanandro vaovao,” nisintona izay nampahazohazo aina natolotry ny aterineto, ireo vondrompiarahamonina zanatany kosa tao Kanadà sy Etazonia dia nijaly bebe kokoa vokatry ny fivakisana nomerika raha ampitahaina amin'ny taloha. Tianao ve ny hanatevina laharana ny adihevitra virtoaly iray momba izay azo hatao hanovàna zavatra? Misorata anarana hanaraka ny ICS 2021. Daty: 12-15 Oktobra 2021 (efa vita ity)
FITAOVANA & OTRIKARENA
Liana ve hianatra fiteny Sm'algya̱x vitsivitsy, fiteny zanatanin'ireo Firenena Voalohany tao amin'ny Morontsiraka Avaratra-Andrefan'i Pasifika? Ankehitriny dia azonao atao ny manatevina laharana ireo hafa mpianatra ato mba handre ny fomba fanonona ireo teny sy ny dikan'ireny teny ireny. Mitady misimisy kokoa? Azonao atao koa ny mahita azy ireo ao amin'ny Youtube!
Ho an'ireo miasa ho an'ireo fiteny tandindonin-doza sy/na vitsy mpampiasa, efa renareo ve ny momba ny Living Dictionaries, fitaovana iray anaty finday izay afaka manampy anao hanangana rakibolana ho an'ny fiteninao? Natambatry ny Living Tongues Institute for Endangered Languages ho anaty lisitra iray ireo fanoroana maimaimpoana hahafahanao manomboka.
Mitady lahatsoratra amin'ny fiteny zanatany afrikàna ve? Fantaro i Bhala, fitendry AI (artificial intelligence) iray mifanaraka amin'ireo fiteny afrikàna, ary henoy izay lazain'ilay mpikaroka ao Harvard tao ambadik'izy io momba ireo fitaovana voalohany amin'io kazarana io.
VAKITENY, FIHAINOANA, ary FIJERY FANAMPINY (amin'ny fiteny anglisy)
How Minority Africa is using innovative storytelling for inclusion
How storytellers in Uganda, Sierra Leone and Kenya are using mobile journalism to tell compelling stories
Isaorana ny fandraisana anjaran'i Eddie Avila sy Ameya Nagarajan tamin'ity taratasim-baovao ity.